ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှာစကား) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှာစကား)	15
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှာစကား)
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 17, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ အဝေးရောက်မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ တိုက်တွန်းသွားတဲ့ စကားလေးပါ ။ ကြိုက်သလိုသာ အတွေးနယ်ချဲ့ ကုန်ပါလော့။ တက်ရောက်လာသူတွေကို လက်ခံထားတဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးကို လေးစားဖို့ အခုလိုတိုက်တွန်းသွားတာပါ။
ahnyartamar says: ဧည့်သည်လိုမနေပဲ အိမ်ရှင်ဟန်ရှိနေတဲ့ လူတွေကို စိတ်ပြန်လည်လာအောင် ဒေါ်စုက သာသာထိုးထိုး သတိပေးလိုက်တာပါ။
ဦးဦးပါလေရာ says: (ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အိမ်ရှင်ကိုလေးစားရမယ်။ အိမ်ရှင်ရဲ့ အကြိုက်ကိုနားလည်ရမယ်။..)
ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ အရင် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသူတွေလဲ လက်ခံနိုင်သွားလောက်ပါတယ်..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2656
padonmar says: အရီးလတ်ရဲ့ အေလီယန်အီးတီလေးလို နေရမယ်ပေါ့။
htoosan says: ကျွန်တော်တို့ အရီးလတ် ကအရင်ပြောတာပေါ့နော်….. :grin:
YE YINT HLAING says: အမေစု ပြောသမျှ စကားတွေ ဟာ တော်တည့်ကောင်းမွန် နေတာချည်းပဲ !
htoosan says: မနက်ဖြန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၇ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ILO ညီလာခံတွင် ပြောကြားသော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မိန့်ခွန်း ဖတ်လိုပါက
MaMa says: အမေစုက စည်းလုံးကြပါ ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း အထူးအလေးပေးပြီး ပြောနေပြီ။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လည်း အမေစုပြောစကားကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်
အမေစုကို ချစ်ကြောင်း ပြသသင့်ကြပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 174
Wai Phyoe says: ကောင်းတယ်ဗျာ ဒေါ်စုပြောတဲ့ speech တွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးပဲ
စင်ကာပူသွားပြီးအဆင့်မ၇ှိ ပန်နစူးလား မှာ ကွမ်းသွေးတပစ်ပစ်ထွေးတဲ့ကောင်တွေ
ဒေါ်စု က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောသွားတာ ဆိုလို၇င်းကတော့ဒါပဲ ကြားလား……………….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 329
ကြည်ဆောင်း says: ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှသော် ဆိုတဲ့ စကားလေးဟာ အမေစု ကို ရည် ညွှန်းထားတဲ့အတိုင်း ကွက်တိပါ။
etone says: ဧည့်သည်ဖြစ်ပြီး …အိမ်ရှင်ဖြစ်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို … သတိပေးတာလို့ မြင်မိပါတယ် … ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် … ဧည့်သည်အဖြစ် ဆက်ရှိနေစေဦးတော့ … နေထိုင်ပြုမူပုံမှန်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေးထားသလိုလည်း မြင်မိပါတယ် … ။ ကိုယ့်ဘက်က အနေမှန်မှသာ … အိမ်ရှင်ရဲ့ … နိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းတွေ ၊ မတရားပြုလုပ်မှုတွေ မခံရမှာဖြစ်ကြောင်း … တဖက်လှည့်နဲ့ … အိမ်ရှင်အရေးစိတ်ပူပေးတာထက် … ဧည့်သည်အရေး စိတ်ပူပေးနေတာလို့ပဲ .. မြင်မိပါတယ် … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8360
ဆူး says: ဧည့်သည်တွေ မီးရှို့လို့.. အိမ်ရှင်တွေ ထွက်ပြေးရတဲ့ ဘ၀ က ကင်းဝေး ကြပါစေ။
ghost says: မလိုချင်ပဲ ရနေတာ…….” ဒုက္ခ ”
လိုချင်လျက် မရနိုင်တာ… ” သုခ ”
လူ ဟား says: ကဲ.. ရိုဟင်ဂျာတွေ… အမေစုပြောသွားတာ .. ကြားတယ်နော်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2177
Thel Nu Aye says: ပညာရှိများပြောလိုက်ရင်တခွန်းပဲ။ ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုထိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲနော်။ ဧည့်သည်အားလုံး မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။
အရီး Khin Latt says: ကထူးဆန်းရေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ စကားတိုင်းက ပညာဥာဏ် မှာ မေတ္တာ ပေါင်းပြီး ပြောထားတာမှန်း သိသာပါတယ်။
သူ့စကားတွေ၊ မိန့်ခွန်းတွေ ကို အများကြီး ထပ်ပြီး နားထောင်ချင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ က ကို အလေးအနက်ထား နားထောင်ရတဲ့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ ရဲ့ ပညာရှိ စကားပြောတတ်သူ ရဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ထားခံခဲ့ရ တဲ့ အချိန်တွေ ကို နှမြောလိုက်တာ။ :-(
ဝင်စွတ် ရရင် အိမ်ရှင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဧည့်သည် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်ရင် တကဲ့ အိမ် အစစ် ရှိရာကို ပြန်ရစမြဲ။
ခဏ နေရတဲ့ အချိန်လေး အတွင်း မှာ ဘာလို့များ လူသားချင်း စာနာတတ်မှု တွေ၊ အကြင်နာတွေ မပေးနိုင်ကြသလဲ။
ငါစွဲ တွေ၊ အယူအဆစွဲ တွေ နဲ့ လူသတ်ပွဲများကို ကျင်းပချင် နေကြ သလဲ။
အားလုံးဟာ တစ်ချိန်တော့ ထားခဲ့ရမှာပါ။
Comments By Postစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - Foreign Resident - padonmarဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - padonmar - အရီးခင်လတ်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Nay Chi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - BMTM Mdy - ရာမညဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAခရီးသည်လေးသို့ - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - padonmarပုညကြိယာဆယ်ပါး - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစည်တော်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မောင် ပေမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - BMTM Mdy - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - cobra“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်အတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်လုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62237 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59309 Kyats )MaMa (58031 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )